E-Journal: Researching the Research
အင်တာနက်ထဲမှာ ဟိုရှာ ဒီရှာလုပ်ရင် ပါဝါပွိုင့်ဆလိုက်တွေကိုတွေ့တော့ ဖတ်ကြည့်မိတာလေးတွေပါ။
Research must be teamed
“Doing alone, no more job and grant; doing as team, plenty of jobs and grants.”
အာဖရိကန် စကားပုံဆိုလိုတာက - ခရီးတခုကို မြန်မြန်သွားလိုရင် တစ်ယောက်တည်းသွားတဲ့၊ အဲ ဝေးဝေးသွားချင်ရင် အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့ အတူတူသွားလို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သူကိုလိုက်တုပြီး ပေါ်လာတဲ့ စကားပုံက တစ်ယောက်တည်းသာ အလုပ်လုပ်နေရင် ဘာမှလည်းဆက်လုပ်စရာပေါ်လာမှာ မဟုတ်သလို၊ ဘာအထောက်အပံ့မှလည်း ရမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ အသင်းအစုအနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်တော့ အလုပ်အကိုင်တွေ၊ အထောက်အပံ့တွေလည်း များလာမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
သုသေသနအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ လုပ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောကို ပြောချင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သုသေသန အလုပ်တခုလုပ်တဲ့အခါမှာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့၊ သဘာရင့် ဆရာတွေက မျိုးဆက်သစ်တွေကို တွဲခေါ်ရမယ်။ တွဲခေါ်မယ်ဆိုတော့ ဝါရင့် သဘာရင့်တွေက မျိုးဆက်သစ် အငယ်တွေကို ဘယ်လိုတွဲခေါ်မှာတုန်း။ အထောက်အပံ့ဆိုတာကလည်းရှိမှသာ တွဲခေါ်သူကလည်း တွဲခေါ်နိုင်ရှာမယ်ပေါ့။ ဒီတော့ အထောက်အပံ့ကို ဘယ်က ရမှာပါလိမ့်။
Research, industry and system asateam and rule of game
Researchers convert tax money to knowledge.
Industries convert knowledge to MORE money (and pay more tax).
System manages to enlarge this spiral circle for benefit of tax payers and nation; creates Knowledge-Based Wealth.
Researchers know what should be done, under what conditions and have postgraduate students as connecting mechanism.
Industries give research problems/conditions, follow up and implement the results.
“Manager” creates system and rule to spirally circulate wealth.
သုသေသနရယ်၊ (စက်မှု)လုပ်ငန်းရယ်၊ စနစ်ရယ်က သဟဇာတဖြစ်နေရမယ်။
သုသေသနသမားက အခွန်ငွေကို အသိပညာအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်တယ်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွေက အသိပညာတွေကို ပိုက်ဆံတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်မယ်။ (ပြီးတော့ အခွန်ထမ်းဆောင်ပေါ့။)
စနစ်က ဒီစက်ဝိုင်းကို အဆင်ပြေပြေလည်ပတ်နိုင်အောင် မောင်းနှင်နိုင်ရမယ်။ (အခွန်ထမ်းသူတွေရယ်၊နိုင်ငံအတွက်ရယ် ပညာကိုအခြေခံတဲ့ ကြွယ်ဝမှုရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမယ်။)
သုသေသနသမားတွေက ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ဘာတွေကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာ သိရမယ်၊ ဘွဲ့လွန်တွေလည်း အဆက်မပြတ်မွေးရမယ်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတွေက သုသေသနလုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လိုပြဿနာတွေရှိတယ်၊ ဘယ်လို အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ရမယ်။ ရလာတဲ့ ရလာဒ်တွေကိုလည်း အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်။
စီမံသူတွေကတော့ ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးအတွက် စနစ်ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီး မောင်းနှင်ထိန်းချုပ်တတ်ရမယ်ပေါ့။
ဒီတော့ကာ တို့နိုင်ငံမှာရော သုသေသနရယ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေရယ် အဆက်အစပ်ရှိပြီလား။ အပြင်ကလုပ်ငန်းတွေရဲ့နည်းပညာလိုအပ်ချက်တွေကို သုသေသနလုပ်ငန်းတွေက လိုက်ပြီးဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီလား။ သုတေသနသမား ကောင်းကောင်းတွေမွေးထုတ်ဖို့ တက္ကသိုလ်ကောင်းကောင်းတွေရော ရှိပြီလား။ တကယ်ကောင်းတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခြေခံအထောက်အပံ့တွေရော ရရှိရဲ့လား။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 7:52 PM
ထောက်ပြထားတာတွေကောင်းပါတယ် ၊၊ မသိခြင်း "လား" ပေါင်းများစွာဟာ ပြီးပြည့်စုံခြင်းပါပဲ ၊၊
မရှိသေးပါဘူး။ အရှိနဲ့ မရှိကိုတော့ မငြင်းလိုပါ။ “လား”ပေါင်းများစွာဟာ မေးခွန်းအဆင့်ကနေ လုပ်ဆောင်မှုအဆင့်ကို ရောက်သင့်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီးနောက်ကျနေပါပြီ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်တစ်ခုပါ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ဆရာကေဇက် ခင်များ။
တိုတို နဲ့လိုရင်း ပြောတတ်ပါပေတယ်။ တကယ့် ပါရမီရှင်ပါပဲ။
အဲဒီလားပေါင်း များစွာကို ဖြေရပါမှာလည်း ဆရာတို့ ကျနော်တို့ ကိုယ်တိုင်ပါပဲ ခင်များ။
ဒီကနေ့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အဓိကတာဝန်အရှိဆုံး လူတွေကို ပြောပါဆိုရင်…
ဆရာတို့ ကျနော်တို့ (၃၀)တန်း လူငယ်တွေပါပဲ ခင်များ။ တစ်ခြား ဘယ်သူမှ မဟုတ်ပါဘူး။